myanmar3 keyboard layout - MYSTERY ZILLION
မူလ › Daily Life › Help Desk
myanmar3 keyboard layout
November 2011 edited November 2011 in Help Desk
i use myanmar3 font but i can't write ၾ
in myanmar3keyboard ြ-- isaj . It have onlyြit will automatically change when you merge , ကြ isau+k and ခြ isac+j
ြက is j+u in my computer. u+k is ကု in my computer. key magic ရဲ့ myanmar3ကိုသုံးတာပဲ။
i type j but not found
i found like this ျ ,i use myanmar3
how to type စကြ်ာ (Satt Kyar) in Unicode? thx.
စကြာ = p+u+G+m မြန်မာယူနီကုဒ်နဲ့ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်
မှာ တွင် ဟထိုး ကို အခု Firefox ထဲမှာတော့ တွေ့ရပါသည်။ Microsoft Word/Excel ထဲကျ ရေးမရပါ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
July 2013 Registered Users
Microsoft Word/Excel မှာ ဟထိုးကို ရေးလို့လည်းရ၊ တွေ့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခုခုမှားနေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။